Xaliimo Yarey oo ka jawaabtay baaqii Madasha Xisbiyada ee la xiriiray inay is casilaan | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xaliimo Yarey oo ka jawaabtay baaqii Madasha Xisbiyada ee la xiriiray inay...
Xaliimo Yarey oo ka jawaabtay baaqii Madasha Xisbiyada ee la xiriiray inay is casilaan
Anagoo sheegeyno doorashada sidee u dhaceyso, kuna cabireyno doorashooyinka adduunka sidey u dhaceen oo la jaan-qaadeyno xaaladda dalkeena ka jirta ayaa hadana waxaan sheegeynay markasta, oo ay ku lifaaqneyd waa in la hellaa sharci doorasho ugu horeyso. Waxaa kaloo ku jirtay inaan helno dhaqaale iyo in nabadgelyadii la suggo. Midda ugu weyn waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas aan sheegeynay in loo wada qaato. Sidii ayaana ku soconay weligeyd.” Ayay tiri Xaliimo Ismaaciil Ibraahim
Waxay sheegtay inaysan ku guuldareystay in doorashada ku qabtaan waqtigeeda, balse waxa dib u dhaca keenay uu yahay, iyadoo aan laga caawinin jidkii ay ku gaari lahaayen in doorashada lagu qabto waqtigeeda
Maqaal horeWasiir Sadiiq Warfa oo khudbad ka jeediyay shirka Wasiirrada Arrimaha Bulshada Jaamacadda Carabta
Maqaal XigaBaarlamaanka Puntland oo maanta kulan ka yeelanaya matalaadii lasiiyey Gobolka Banaadir